Landela imakethi ye-crypto ngeKlever News.
Jonga uphuhliso lwethu yendlela.
Ithekhnoloji yeleja eyasasazwa njani buza kuzisa elubala kwiWorld Bank Green Bonds
Sineplanethi enye kuphela, kwaye njengoluntu, siye sawela inqanaba leemfuno esizenzayo kuyo. Iingxaki thina...
Isetyenziswa njani idatha yakho kwihlabathi leentlawulo zedijithali?
Iintlawulo zedijithali azinakwenzeka ngaphandle kwedatha. Ukusetyenzwa kwedatha ngexesha leentlawulo zedijithali ngundoqo kwiintengiselwano ezenziwe nakweliphi na iqonga ledijithali. Iintlawulo zekhadi, idijithali...
I-Klever Exchange isungula indawo entsha yeMarike ye-NFT [Beta]
Ngojongano lomsebenzisi omtsha we-NFT, ungathengisa ngokukhawuleza okanye uthenge ii-NFTs zakho kwindawo enamandla kunye ne-Klever. Ukongeza kwi-Devikins, thina...
Indlela uKlever akuvuza ngayo kwaye uyayixhasa inkululeko yakho yezemali
Ehlabathini lonke, abantu ngoku bazibona bebotshelelwe ngokwezimali kwaye baphila ebuhlwempu. Ehlabathini namhlanje, kukho imfuneko enkulu yamaphulo okhanyiselo...
Izibonelelo ze-crypto wallet ekhuselekileyo
Iimbono ziyatshintsha kunye nokutshintsha kweparadigm ehambelana netekhnoloji yebhloko kunye nesithuba se-cryptocurrency. Yintoni ukunatyiswa kwamagunya? Ukwabela amagunya yinkqubo apho...
Kutheni le nto umdyarho wasemajukujukwini uzuza i-crypto innovation?
Ukuqhuma kokuhlolwa kwendawo kuye kwakhokelela ekuphuhlisweni kwe-crypto-innovation exhasa amaphupha abantu abucala kunye namaqela okungena kwindawo ngaphandle kwe ...
I-Klever Weekly Newsletter-Januwari 14
I-Klever kunye ne-Polkadot zisebenzisana ukwenza ithokheni ye-DOT isebenze kwi-Klever ecosystem Klever yenza inkxaso ye-Polkadot Chain kuguqulelo lwamva nje lwe-Android, i-4.10.0 ye...
Izitshixo ezigciniweyo: Ungawagcina njani ngcono amaqhosha akho e-Klever Exchange
Nanini na xa uvula iakhawunti yokurhweba nge-crypto nangaluphi na utshintshiselwano lwe-crypto, kuya kufuneka ukhethe isixhobo sobunyani se-2FA. Iiakhawunti zokurhweba ze-Crypto kunye ne-Klever Exchanges...
Ngubani ozuzayo kwihlabathi elingenamali?
Ngexesha lokudodobala koqoqosho lwehlabathi ngo-2008, abantu abaninzi bathathela ingqalelo enye indlela kwinkqubo yezemali, kodwa ukuqaliswa kweBitcoin ngo-2009 kongeze amafutha kwi...
Ividiyo: Ukukhusela i-crypto yakho ngendlela ye-Klever kufuneka ihlale iphambili engqondweni
Ukhuseleko akufunekanga lujongelwe phantsi. Jonga ezi ngcebiso ukuze uqiniseke ukuba i-cryptocurrency yakho ikhuselekile kwaye ikhuselekile....
Ukunyuka kwe-cap yemalike yeza njengoko imali ye-capital capital kwilizwe lonke ityale malunga ne-30 yeebhiliyoni zeedola kwi-cryptocurrency ngo-2021 iVenture capitalists...
I-Klever kunye ne-Polkadot ziyasebenzisana ukwenza uphawu lwe-DOT kwi-ecosystem ye-Klever
U-Klever wenze iiparamitha ze-Polkadot ngaphakathi kwe-Klever Wallet; ezo mpawu ngoku ziyinxalenye yohlaziyo olutsha lukaKlever 4.10.0 lwe-Android. Iimpawu eziNtsha ziquka: iPolkadot...
«Ngaphambilini Page1 Page2 Page3 ... Page32 Okulandelayo »
Funda ngakumbi malunga ne-cryptos
Ingqekembe yeVeki: Kusama (KSM)
Yintoni iKusama (KSM)? I-blockchain ye-Kusama yakhelwe phezu kwe-Substrate-iqonga le-blockchain elivela kwi-Parity Technologies. Ikhowudi yaseKusama iphantse yafana...
I-Bitcoin ayisiyoyokuqala kuphela, kodwa ngaphandle kombuzo eyona blockchain ikhuselekileyo ekhoyo inikezwe ukwamkelwa kwayo ngobuninzi kunye nokuzinikela kubungqina bokusebenza kwemigodi, ethi...
Ingqekembe yeVeki – iPolygon (MATIC)
Eyayibizwa ngokuba yiMATIC, iPolygon yiplatifomu ye-blockchain scalability eyakhelwe kwi-Ethereum Blockchain system. Ikwabizwa ngokuba yi-Intanethi ka-Ethereum yeeBlockchains....
Yintoni iChiliz (CHZ)? I-Chiliz yimali ye-crypto esetyenziselwa kuphela imidlalo kunye nokuzonwabisa yifemu yaseMalta yaseFinTech. Isebenza kwiSocios, a...